Chii Chinonzi Internet Speed ​​Test?
Injini yevheti yekutengesa ndiyo nzira yekuongorora mitambo yakawanda yekubatanidza mabheji nekutumira chiduku chiduku kubva kune sevha uye kuenzanisa nguva inotora kuti idziwe uye woira iyo faira kumashure. Pakati penzira, zviyero zvakadai sejitter uye kuputsika kwepakiti zvinogona kuverengwa zvakare. Mamwe mavhesi ekutsvaga anowedzerawo kuverenga ping, iyo ndiyo nguva yokuti shoko riite rutsoka rwendo rwese kubva kumutumisi kuenda kunopinda uye kumashure, nokutumira Internet Control Message Protocol (ICMP) echo pakushuva pakiti kumubati.
Mhando dzepamhanho dzekutsvaga dzine mavhavhari akawanda anowanikwa munyika yose, iyo inobvumira mutengi kuti aedze intaneti nekukurumidza kune nzvimbo dzakasiyana. Zvakanakisisa kuedza nokukurumidza nes server iri pedyo nevhareji yewebsite kana web application iri kushandiswa; kana zvisina kudaro, iyo inonzi yakakurumidza kukurumidza haifaniri kuratidza kushandiswa kwemazuva ekushanda.
Chii Chinonzi Ping?
Iyo ping ndiyo nguva yaunofambidzana nayo–kukurumidza sei kuwana mhinduro pashure pokunge watumira chikumbiro. Nzira yekutsanya inoreva nzira yakawanda yekuteerera, kunyanya mumashandisirwo apo nguva nguva dzose (semitambo yemavhidhiyo). Ping inotaridzwa milliseconds (ms).
Chii Chinotora Speed?
Iko kukurumidza kukurumidza kuti iwe unokurumidza sei kudhonza data kubva kune server kune iwe. Kukurukurirana kwakawanda kwakagadzirirwa kuchengetedza zvakakurumidza kudarika zvavanenge vaita, sezvo vazhinji vemaitiro eIndaneti, kufanirwa kutakura mapeji ewebhu kana mavhidhiyo ekutsvaga, zvinoshandiswa nekutsvaga. Kundisa kasi inoyera mu megabits kwechipiri (Mbps).
Chii Chinokurumidza Kuisa?
Ikufambisa kunomhanya ndeyokurumidza kutumira data kubva kwauri kune vamwe. Kuisa kune zvakakosha pakutumira mafaira makuru kuburikidza ne-email, kana mukushandisa vhidhiyo-kutaurirana kuti utaure kune mumwe munhu ari paIndaneti (sezvo uchifanira kutumira vhidhiyo yako zvokudya kwavari). Kushandisa kwekukurumidza kunowanikwa mumamigabiti kwechipiri (Mbps).